China Mining Rock Ore Ukugaya Ball Mill Powder Ukugaya Machine ifektri kanye nabaphakeli | Khuphuka
Imayini yedwala le-Ore Ukugaya i-Ball Mill Powder Machine Ukugaya
Umshini wokugaya ibhola ufanelekile emgqonyeni we-powder uhlobo ngalunye lwe-ore nezinye izinto, isigayo se-balll sisetshenziswa kakhulu ekugqokeni, ubuchwepheshe, izinto zokwakha nemboni yamakhemikhali njalonjalo. Ihlukaniswe izindlela ezimbili zokuzihlikihla - ezomile nezimanzi .Kunezinhlobo ezimbili zebhola lokugaya, uhlobo lwe-grate nohlobo lokuwela ngenxa yezindlela ezahlukahlukene zokukhipha impahla. Umshini wokugaya ibhola uyithuluzi eliyisihluthulelo lokugaya izinto ezichotshoziwe ngemuva kokuthi impahla iphukile, nokuqhubeka nokushayeka futhi. futhi isigayo sebhola sisetshenziswa kakhulu emgqeni wokwenza impuphu kufaka phakathi usimende, i-silicate, izinto zokwakha zohlobo olusha, okokuphikisa, umanyolo, ukugqoka insimbi yensimbi nensimbi engeyona eyensimbi, ingilazi yobumba, njll. isigayo sebhola siqhubeka uhlobo olomile noma impuphu emanzi kuhlobo ngalunye lwe-ore nakwezinye izinto ezigaywayo.
Umshini wokugaya ibhola uyithuluzi eliyisihluthulelo lokuhlehlisa kabusha. Isetshenziselwa kabanzi usimende, umkhiqizo we-silicate, uhlobo olusha lwento yokwakha, okokuvikela umlilo, umanyolo wamakhemikhali, insimbi emnyama nengasebenzi, ingilazi, izinto zobumba nokunye. Ibhola lethu lokugaya lingagaya insimbi noma ezinye izinto ezingaba kugaywe noma ngenqubo emanzi noma ngenqubo eyomile.
Umshini webhola ulungele ukuzuza nokugaya impukane yomlotha, i-limestone, isihlabathi se-quartz, i-aluminium powder, i-powder yamalahle, i-slag yensimbi, i-ore, i-potassium feldspar, i-iron ore, i-iron slag, i-aluminium slag, i-silicon carbide, i-alumina, iqoqo lamalahle kanye ezinye izinto.
Ingxenye eyinhloko yamanzi okusila ibhola iyisilinda esinobubanzi obuncane nobude obukhulu obujikeleza kancane ngedivayisi yokudlulisela. Okokusebenza kudliswa kusuka kusigaxa sesilinda nasemhlabathini ngomthelela webhola lensimbi ne-ore nokuzigaya. Ngenxa yento eqhubekayo yokudla, ingcindezi iphusha impahla iye esitolo futhi impahla yasemhlabeni iyakhishwa esilingweni. Igridi efakwe esitolo samatshe igayelwe ukukhishwa okuphoqelelwe. I-pulp ephansi ebusweni ku-cylinder inciphisa i-ore ngaphezulu kokugaya, futhi ivimbele ibhola lensimbi ukuphuma. Ngaphansi kwezimo ezifanayo zokukhiqiza, umthamo wokukhiqiza wegridi wesigayo mkhulu kunokugaya okuchichimayo. Yomibili imikhawulo yomzimba oyisilinda yamukela ukugoqa kokugoqeka esikhundleni sokuthwala okuslayidayo, okonga kakhulu amandla.
（R / iminithi）
301830 × 3000 25 10 ≤25 0.074-0.4 4-11 130 25
301830 × 3600 25 12 ≤25 0.074-0.4 4.3-12 155 32
301830 × 4500 25 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-16 155 33.7
301830 × 6400 25 21 ≤25 0.074-0.4 6-17 210 38
301830 × 7000 25 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-18 210 43
Langaphambilini Igolide Ore Ukugaya Okumanzi Pan Mill Machine
Olandelayo: I-Portabel Alluvial Placer Gold Washing Plant Trommel Sluice Ibhokisi
Igolide yethusi Ore Stone Ball Mill Ukugaya Mill M ...
1100 1200 Model Igolide emanzi Pan Mill Machine In Af ...
1400 1500 1600 Gold ezimanzi Pan Mill Chilean Mill F ...
Igolide Ore Ukugaya Okumanzi Pan Mill Machine
Powder Ukwenza Ukugaya Mill Raymond Mill Machine